Ma ebe kwesịrị ị na-aga? Ma ọ bụ gị oge mbụ ma ọ bụ gị iri, n'oké olu nke ụgbọ oloko dị nwere ike ime ka nchegbu, mgbagwoju anya, na egwu zuru oke ịhapụ. iche bụghị – n'ihi na anyị gbakọtara ebe a ịwụ ndepụta nke 5 kacha mma European n'isi obodo na njem na ụgbọ okporo ígwè. Tukwuru ala, nkechi elu, na-azọpụtanụ ụlọ maka France kasị mma baguettes, n'ihi na anyị na-aga na a na-agba ịnyịnya.
N'ezie, Paris bụ ihe karịrị ya obodo center. The-esetị obodo ukwu karịrị nde mmadụ abụọ na, nke pụtara na ị ga na-emefu izu ebe a na-enweghị n'ezie scratching elu nke ihe o nwere na-enye. Getaway maka a ụbọchị njem si ìgwè na Pont Alexandre III na isi Versailles, ebe Royal Obí ka na-achị achị elu n'agbanyeghị ya ohere kemgbe 1700 si. Day tiketi ndị dị nnọọ € 20 na-agụnye ntinye Obí, na Ubi, na ọtụtụ ndị ọzọ. ọbụna ka mma, ụgbọ oloko na-agba ọsọ site n'etiti obodo ozugbo na Obí, nke na-eme na-e a ikuku. Nke a interconnectedness eze na-eme ka Paris otu n'ime anyị mma European n'isi obodo maka ụgbọ okporo ígwè njem.
Otu nke m onwe onye ọkacha mmasị obodo na a mere awa abụọ site Paris ụgha isi obodo nke United Alaeze: London. Nke a agbaze ite nke omenala bụ n'ụlọ ka a whopping nde mmadụ itoolu ndị mmadụ si n'agbụrụ dị iche iche. Site posh Chelsea na spirited Soho, ị ga-ahụ ihe omume maka onye ọ bụla na nnọkọ gị. Catch otu n'ime ọhụrụ egwú tupu n'isi n'elu Shakespeare Globe na rụchaa abalị gị na Shard, na tallest ụlọ elu dị na London.
Ụgbọ elu Eurostar dị elu na-ewe gị site na Paris gaa na etiti London naanị ihe karịrị awa abụọ, nke pụtara na ị ga-anọ obere oge na-ejegharị ejegharị na ndị ọzọ oge adventuring. N'ihi ya, anyị na -ewere London ka ọ bụrụ obodo ọzọ kacha mma na Europe iji ụgbọ oloko na -aga.
Iche Western European n'isi obodo, Prague bụ isi obodo nke Czech Republic na Eastern Europe na otu n'ime ndị kasị ama Central European obodo. Home ka otu n'ime ndị kasị ama ọba akwụkwọ na ụwa, na Klementium, Prague ewepụtakarị ya omenala gburugburu n'akụkụ ọ bụla. Gaa Leta Astronomical Elekere, ndị kasị ochie ọrụ elekere na ụwa. Were mkpagharị gburugburu Ogige Old Town, ebe cobblestone n'okporo ámá na pedestrianized Lanes pụtara i nwere ike iji ọtụtụ awa na-awagharị awagharị na-enweghị-echegbu onwe.
Europe bụ a sara mbara na iche iche odida obodo onye Union pụtara na ọ dị mfe karịa mgbe ọ bụla na-eme njem ụgbọ okporo ígwè. -Uru nke borderless mba njem ndị a akụkọ ihe mere eme isi gị oge. Ikwu na isi ọwụwa nke na ọdụ na ya ìgwè mmadụ na overpriced ụgbọelu nri na-eji ụgbọ okporo ígwè na njem. Ma ị na hop na osisi a na mpaghara ụzọ ma ọ bụ na-emefu a obere ụma maka elu-ọsọ okporo ígwè, i ga-ebi tren njem, nlegharị anya, na ọtụtụ ihe ndị ọzọ.
Anyị nwetara gị kpuchie anyị njem Atụmatụ. Ugbu a ọ bụ oge akwụkwọ ụfọdụ gbaa ụgbọ okporo ígwè! Save A Train bụ ebe ịzụta ụgbọ oloko.
Ị chọrọ Embed anyị blog post “5 Best European n'isi obodo Iji Travel Site Train” na na gị na saịtị? Ị nwere ike ma na-ewe anyị foto na ederede na-enye anyị n'aka na a njikọ a blog post. Ma ọ bụ pịa ebe a: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Feuropean-capitals-travel-train%2F%3Flang%3Dig የሰማይ አካላት- (Pịgharịa gaa na ala a obere ịhụ Embed Usoro)